कोरोना भाइरसको त्रासका कारण घर फर्किएका एक जना मजदुर यसरी रातारात बने करोडपति
एजेन्सी । विश्वभर कोरोना भाइरसको त्रास रहेको छ । यसबाट बच्च मानिसहरुले उच्च सतर्कता अपनाइरहेका छन् । भारतमा भने एउटा रोचक घटना घटेको छ । विस्तृतमा
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला, १४ वर्षको उमेरमा प्रोफेसर !
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्ला, १४ वर्षको उमेरमा प्रोफेसर । तर, यस्तै भएको छ । लीसेस्टर विश्वविद्यालयमा एक १४ वर्षीय मुस्लिम किशोर गणित विषयका प्रोफेसर बनेका छन् । याशा एस्लेलाई लीसेस्टर विश्वविद्यालयले अतिथि शिक्षकको रुपमा चयन गरेको हो ।
अमेरिकी पुर्व राष्ट्रपति बाराक ओबामा बारे १० रोचक तथ्यहरु
श्रीमानले जुत्ता धेरै किनेपछि श्रीमतीले दिइन् डिभोर्सको धम्की !
गुजरातमा विश्वकै अग्लो स्मारक अनावरण गरिँदै, स्थानीयको विरोधकाबीच प्रहरीको कडा सुरक्षा
सरदार सरोवर ड्याम । भारतको गुजरातमा निर्माण गरिएको विश्वकै सबैभन्दा अग्लो स्मारकको अनावरणका लागि बुधबार भव्य तयारी गरिएको छ ।
सन् २००८ मा भएको मुम्बइ हमलामा स्वयमं भारतको नै हात !
एजेन्सी । पाकिस्तानबाट प्रकाशित हुने एक उर्दु पत्रिकाले विश्वभर सनसनी मच्चाउने रहस्य बाहिर ल्याएको छ । उक्त पाकिस्तानी पत्रिकामा एक जर्मन लेखकको सनसनीपुर्ण दाबीलाई चर्चीत बनाइएको छ । सन् २००८ को नोभेम्बर २६ मा भएको मुम्बइ हमलामा स्वयमं भारतको नै हात रहेको उल्लेख गरिएको छ ।
अजबगजबको देश जहाँ प्रत्येक हप्ता दुई अर्वपति उत्पादन हुन्छन्
स्वीट्जरल्याण्ड । चीनले सन् २०१७ मा प्रतिहप्ता दुई जना अर्बपतिलाई उत्पादन गर्ने गरेको यूनियन बैङ्क अफ स्वीट्जरल्याड (यूएसबी) ले गरेको एक अध्ययनले जनाएको छ ।
अम्बा अड्किएर बालकको मृत्यु
पोखरा । स्याङजामा बेलाउती (अम्बा) खादा अड्किएर एक बालकको मृत्यु भएको छ । स्याङजाको वालिङ नगरपालिकाा १३ सिख्रेका प्रकाश नेपालीको ५ बर्षिय छोरा प्रिन्स नेपालीको बेलाउती अड्किएर मृत्यु भएको हो ।
एजेन्सी– जनसँख्या नियन्त्रणका लागि ठूलो कसरत गरिरहेका नेपालीहरुका लागि यो अचम्मकको समाचार हो । उत्तरी इटालीको एउटा सानो सहरका लागि
यस्तो देश जहाँ छात्रवृत्ति पाउन कुमारित्व परीक्षण गरिन्छ
एजेन्सी । दुनियाँभर छात्रवृत्तिका लागि एउटा सर्वमान्य मान्यता छ, विद्यार्थी गरिब तथा जेहेन्दार हुनुपर्छ । तर, कतिपय अवस्थामा पहुँच र शक्तिका आधारमा अरुले पनि छात्रवृत्तिको अवसर भोग गर्छन ।
भोपाल, भारत । भारतको मध्यप्रदेशमा एक व्यक्तिलाई तीन तलाक दिएको अभियोगमा प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । केन्द्र सरकारले मुस्लिम समुदायमा सम्बन्ध बिच्छेदका लागि प्रयोग हुने “तीन तलाक” लाई प्रतिबन्ध लगाउने कानुन पारित गरेको एक महिनापछि नै यस्तो घटना भएको हो ।